लिस्बन मा सप्ताहन्त प्रस्ताव - एक विशेष मूल्य मा उडान प्लस होटल | यात्रा समाचार
Un लिस्बनमा सप्ताहन्त यो सँधै राम्रो समाचार हो। सबैभन्दा माथि, जब हामी बन्द र आर्थिक मूल्यको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन दुबै उडान र होटेल समावेश गर्दछ। पोर्तुगालको राजधानी सधैं लुगा लगाउँदछ जुन विश्व भर बाट आउँदछ।
तसर्थ, तपाईं अवसर मा भएको छ भने पनि, यो दोहोर्याउन एक राम्रो समय हो। किनभने तपाईं नयाँ गतिविधिहरू फेला पार्नुहुनेछ, किनाराहरू सहित जुन तपाईंसँग सधै भ्रमण गर्ने समय हुँदैन र यी सबै कुराको लागि धेरै कम मूल्य जुन तपाई कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि, सबै कम्फर्ट्सको साथ र सधैं केन्द्रमा। के तपाइँ यस प्रकारको अफर आनन्द लिन चाहनुहुन्छ?
1 उडान + होटल लिस्बनमा एक सप्ताहन्तको लागि
2 लिस्बनमा दुई दिनको फाइदा कसरी लिने?
उडान + होटल लिस्बनमा एक सप्ताहन्तको लागि
यो सत्य हो कि संसारको कुनै पनि कुनामा जान्न, हामी सँधै सप्ताहन्तमा भन्दा बढि समय चाहिन्छ। तर यस अवस्थामा, हामीले उल्लेख गरेको जस्तो प्रस्तावलाई पनि व्यर्थमा बर्बाद गर्न सकिदैन। किनकि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई चकित पार्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई दुई दिन दिन सक्नुहुनेछ अद्वितीय र रोमान्टिक सेटिंग। शुक्रबार, मे १ 17 को बिहान हामी गन्तव्यको लागि प्रस्थान गर्दैछौं, आइतवार दिउँसो फिर्ता गर्न।
प्रस्थान म्याड्रिड देखि ठाउँ लिन्छ र आगमन, पक्कै पनि, हम्बर्टो डेलगाडो एयरपोर्टमा हुनेछ। एक यात्रा जुन एक घण्टा भन्दा कम लिन्छ। त्यसो भए आँखा झिम्केमा तपाईं पहिले नै एक विशिष्ट गन्तव्यको मजा लिनुहुनेछ। जब हामी केवल दुई दिनको बारेमा कुरा गर्दैछौं, हामी केवल टिकटमा समावेश भएको हाते सामानहरू मात्र बोक्ने छौं, त्यसैले चेक इन गर्न हामीले पर्खनु पर्दैन।
त्यहाँ एक पटक, हामी मा रहनेछौं होटल 'टुरिम Iberia होटल', जुन केन्द्रदेखि तीन किलोमिटर मात्र अवस्थित छ। यो 'Calouste Gulbenkian' संग्रहालयको नजिक छ र कुल 864कोठा छ। यो उल्लेख गर्नु पर्छ कि एयरपोर्ट करिब kilometers किलोमिटर टाढा छ, त्यसैले हामी पनि एक महान निकटताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, दुबै मेट्रो र बसको विकल्पको अतिरिक्त। त्यसोभए, सारांशमा हामीसँग यो छ कि यस होटलमा दुई रात बस्नका साथै उडानको लागि प्रति व्यक्ति २ 259eयूरो लाग्छ। राम्रो विचार जस्तो लाग्छ? ठीक छ, तपाईं पहिले नै आरक्षण गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिम समय.
लिस्बनमा दुई दिनको फाइदा कसरी लिने?
हो, त्यहाँ धेरै कुनामा छन् जुन लिस्बनले हामीलाई प्रदान गर्दछ। त्यसकारण, लिस्बनमा एक सप्ताहन्तमा हामीलाई यसको सडकहरूमा हिंड्नको लागि पर्याप्त घण्टा पनि छोड्दछ। हामी कलबाट सुरू गर्न सक्छौं Baixa पड़ोस जुन सबैभन्दा केन्द्रिय हो। त्यहाँ तपाईंले अभेनिडा डे ला लिबर्टड वा प्लाजा डे लस रेस्टोरोडोरहरू फेला पार्नुहुनेछ र यसको ठीक छेउमा, प्लाआ डो रोसियो पाउनुहुनेछ। को सान्ता Justa लिफ्ट यो ती आकर्षणहरु मध्ये एक हो जुन हामीले पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। यो शहरको माथिल्लो र तल्लो भागहरू जोड्ने एउटा तरिका थियो, यद्यपि यो आज पर्यटकीय आकर्षण हो।
अर्को मुख्य कुरा ब्यारिओ अल्टो हो। त्यहाँबाट हामी मिरादोर डे स्यान पेद्रोबाट पाएको अद्भुत दृश्य अवलोकन गर्न सक्छौं। यस क्षेत्रमा हामीसँगै स्यान रोक्को चर्च पनि हुनेछ, यदि हामी 'Rúa Pedro de Alcántara' सडकमा गयौं भने। प्लाजा डेल कमरसिओको पनि अविश्वसनीय दृश्यहरू छन्, त्यहि समयमा हामी अर्को प्रतीकस्थल स्थानहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। को अल्फामा छिमेक यो अर्को बिन्दु पनि हो जुन हामीले सप्ताहन्तमा लिस्बनमा भ्रमण गर्नुपर्दछ, साथै सान्ता लुजिया दृष्टिकोण.
J औं शताब्दीमा निर्मित सान जर्जको क्यासलले पर्यटकहरूका सबै झलकहरू समेट्छ। यहाँबाट, तपाईं गल्लीको सडकमा जारी राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले पाउनुहुनेछ लिस्बन क्याथेड्रल, बाह्रौं शताब्दी देखि डेटि।। अर्को गन्तव्य हुनेछ Belém र यसको टावर। जे होस्, जेरेनिमोस मठलाई नबिर्सनुहोस्, जुन टावरको साथमा एक विश्व विरासत स्थल पनि घोषित गरियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » लिस्बनमा सप्ताहन्तको प्रस्ताव: उडान + विशेष मूल्यमा होटल
म्यूजियो रेना सोफिया